China Felt coasters & placemats fekitori nevagadziri | Huasheng
Kurema kwekunzwa / kushushikana pad
color polyester yainzwa
Flame akadzokera akanzwa
Kupisa kukuru kwakanzwika
Kuchenesa akanzwa jira
Tennis bhora akanzwa
yakamanikidzwa mvere dzakanzwika
Tsono yakaboiwa punching
Oketi yakasanganiswa yakanzwa
mvere dzakanzwa zvigadzirwa
mvere dzakanzwa vhiri
akanzwa chisimbiso & gasket
Felt sauna seti
asingaperi akanzwa bhandi
hunyanzvi hwainzwa zvigadzirwa
akanzwa placemats & coasters
akanzwa penzura kesi
akanzwa laptop bag
akanzwa kuchengetedza dengu
anti slip yakanzwa
anti condensation akanzwa
kabhoni fiber yainzwa
PAN-yakavakirwa Carbon Felt
kudzika glue akanzwa
Inzwa coasters & placemats
Yedu yakanzwika coasters & placemats anogadzirwa nemhandara merino mvere akanzwa, achivaita kwete chete anogara uye eco-ane hushamwari, asiwo akanaka.
Izvo zvakanakira zvinwiwa zvinopisa uye zvinotonhora, uye chimiro chiri nyore uye zvakapfava zvakagadzirwa kuti zvishande mukati meyemukati yenzvimbo yako yekushandira kana imba.
Chinhu Inzwa coasters & placemats
Chinyorwa 100% merino mvere
Saizi 4x4 '', kana yakajairidzwa
Ruvara Ruvara rwePantone
MaShapes Round, hexagon, chigwere, etc.
Kugadzirisa modes Kufa kucheka, laser kucheka.
Kudhinda sarudzo Silkscreen kudhinda edhijitari kudhinda kwemafuta kudhinda kudhinda.
Logo sarudzo Laser Scanning, silkscreen, rakarukwa rakarukwa, dehwe rakarongedzwa, nezvimwe.
Mafuta edu 100% akanzwawo chisikwa, chinovandudzwa sosi zvinoreva kuti haina dhiri rezvinhu zvine chepfu. Iyo yakasarudzika, biodegradable sarudzo yeiyo eco-hushamwari imba.
[Zvakanaka uye zvakapfava]
Yakagadzirwa neya nyoro merino mvere, edu ekunwa coasters ane zvinyoro kune ako maficha uye inopa zvinyoro kutatisa nzvimbo yegirazi rako kana mukombe. Haizo kukonzera kukuvara kunge mabwe kana ibwe kana zvangoerekana yadonha.
[Yakasimba uye yakasimba]
Merino mvere dzakanzwika dzakasarudzika sezvo inosanganiswa neakakora uye akapfava mafirita ayo akanyatso kuvharirwa mukati mekushisa kukuru uye kumanikidza. Mhedzisiro yacho inonzwa yakadzama, yakasimba uye haingabatike, kubvarura kana kupwanya.
Woolen coaster mapads ndiyo yakasarudzika NASI. Izvo zvinogadziridzwa uye zvinoteerwa. Wool kunyange ine ANTI-BACTERIAL zvimiro nekuda kwekuvapo kwezvisikwa kwelolin.
Neraki rakanaka kuti mvere dzinopesana nevhu nemarara. Kunge chero chinhu chipi zvacho chiri mumba mako, chinofanira kuve chakanatswa. Nhanho yekutanga yakanaka ingave yekuedza kuchenesa nemucheka wakasviba. Vanogona zvakare kushambidzwa mumvura inotonhorera vachishandisa zvinyoro nyoro uye vozoiswa pasi kuti vaome. Izvi zvinogadzirwa kubva 100% merino mvere saka maitiro angave akafanana nekutarisira mhando dzemvere dzemhando yepamusoro.
Wool zvakare yakasarudzika inoputika kuregererwa. Mhungu inosvikirwa mumachira emvere dzemuchira-ichisiya fenicha yako isina ngozi (uye coaster rako risinganamati negirazi rako).
Yepfuura: Felt keychain
Inotevera: Akanyorova chirimwa
Kwete 195, Xuefu Road, Shijiazhuang, Hebei China